Apple puree - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Applesauce dia a arahina mety indrindra ho an'ny hena, hena, henan-tsakafo ary hamenoana mofomamy na mofomamy. Izy io dia fomba iray hanomezana loko sy io fikitika mamy amin'ny lovia anay io.
Ny puree paoma ho haingo dia manome antsika fifanoherana noho ny tsiro mamy lavorary eo amin'ny lanilaniny, ankoatry ny maha betsaka azy salama sy maivana noho ny saosy vita amin'ny sakafo matavy. ny paoma Araka ny fantatrao, manankarena ny lovia amin'ny fibre izy ireo, ary koa otrikaina sy otrikaina manapoizina. Ka io no fiarahana mifanentana amin'ny lovia sasany amin'ny Krismasy.
Ny tsara indrindra dia tsotra ny manomana ary Tena zavatra maro satria miaraka amina kinnona dia mety ho tsindrin-tsakafo matsiro ihany koa.
Ity puree paoma ity dia azo ampiasaina amin'ny fomba mahandro sy mamy.
Fotoana manontolo: 21M
Paoma volamena na pippin 1000 g
ny ranom-boasarimakirana 1/2
Rano 30 g
Voaso ny paoma, atsofokay ary esorintsika ho antonony. Nataonay tao anaty vera niaraka tamin'ny rano, ny ranom-boasarimakirana, ny sira ary ny dipoavatra izy ireo. Izahay dia manao fandaharana 20 minitra, 100º, hafainganam-pandeha 1.
Izahay dia manampy ny dibera sy ny programa 10 segondra, hafainganam-pandeha 3.
Manolotra mafana na mangatsiaka miaraka amin'ny lovia hohaninay izahay.
Fanazavana fanampiny - Zucchini sy jamam-paoma
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, Navidad, Postres, Saosy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Saosy » Apple puree
Salama Silvia, misaotra tamin'ity fomba fahandro tsotra sy azo ampiharina ity. Tiako fotsiny ny paoma ary ny pie poma avy amin'ny thermomix dia iray amin'ireo ankafiziko indrindra, saingy mbola tsy afaka nametraka azy io tamin'ny zavatra toy ny hena mihitsy aho.
Manantena ny fampiharana azy aho.
Miditra ny bilaoginao isan'andro aho hijery ireo fomba fahandro. Voafitaka aho!
Misaotra, misaotra ary misaotra.
Misaotra betsaka anao nahita anay, Ester. Manantena aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra.
pepita marti garcia dia hoy izy:
Salama Silvia, hampiharinay ny puree paoma, hiaraka amiko amin'ny lovia, ny paoma, tiako ny natsatsika, ary mieritreritra aho fa, mba hampiharina azy dia misaotra betsaka, satria ho hitanao isan'andro hifandray aho aminao, izaho dia mifatotra, oroka
Mamaly an'i pepita marti garcia
Ity puree ity dia matsiro be, Pepita. Manantena aho fa tianao izany. Misaotra betsaka fa mpanaraka mahatoky ianao.
Sebeair dia hoy izy:
Salama indray, ry zazavavy amin'ny ratsy, nahazo ny tsara nifankahita taminao aho Tiako ireo resipeo efa nosoratako vitsivitsy ary ambonin'izany rehetra izany dia mahafinaritra ianao satria nampiasa ny thermomix nandritra ny volana vitsivitsy ary mbola matahotra be aho izy ary tiako ny hanararaotra azy indrindra toa ny ataonao, ny hevitry ny paoma tiako dia andramako. Oroka.
Mamaly an'i Sebeair
Faly aho fa tianao ny bilaoginay, Sebeair. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Ny mpanjaka dia nitondra ahy ny thermomix efa ela lasa izay ary tamin'ity taona ity dia nitondra moulinex minut mpanao fahandro masaka ho an'ny mpahandro sakafo elektrika aho. Nieritreritra ny hividy ny fusion cook aho satria milaza amiko ny bokotra raha ny hena, trondro sns.
Fantatrao ve raha afaka mahazo fampisehoana mitovy amin'ny moulinex toy ny hafa aho?
Miala tsiny, saika hadinoko, nahomby tamin'ny apple puree aho, tian'izy rehetra be daholo izany.
Misaotra betsaka anao Silvia.
Faly aho, Marisa!. Mirary ny soa indrindra.
Salama Marisa, azafady fa tsy afaka manampy anao aho, fa tsy fantatro hoe inona izany. Tsy manana mpahandro fusion koa aho. Mirary ny soa indrindra.
Misaotra betsaka!! Tena te hanao an'io puree io aho, saingy tsy sahy nanao fanavaozana amin'ity resipeo ity ... Rehefa manana vahiny aho dia hataoko azo antoka!
Jessie, matsiro be izy, azo antoka fa tianao ny miaraka amin'ny lovia rehetra.
Salama zazavavy, lazao aminao fa nanao ny roscon de reyes aho ary fahombiazana tokoa izany ka nangataka iray hafa ny fianakaviako ny ampitso. Misaotra, oroka kely. (Asio kaloria kely ambany azafady)
Faly aho fa ho tianao izany ary ankehitriny hoy ianao milaza fa hanomboka amin'ny zavatra maivana izahay. Mirary ny soa indrindra
Salama, satria tsy nahazo ny resinao nandritry ny roa andro aho, dia tiako ho fantatra raha nandefa bebe kokoa ianao.
Salama Marisa, omaly izahay dia namoaka ny vichyssoise ary ny faha-6 ny paoma. Jereo fa voasoratra ara-bakiteny satria amin'ny teôria dia mila mandray azy ireo ianao, toy ny mahazatra. Holazainao amiko.
Salama Silvia, nahita anao aho tato ho ato ary androany nanandrana nanamboatra bunuelos paoma aho, tena tsara izy ireo ... Nanompo azy ireo mangatsiaka niaraka tamina mpiambina mafana aho (anglisy ny namako ary maro ny tsindrin-tsakafo naroso tao).
Ataoko puree ny paoma ho an'ny hena amin'ny alàlan'ny fanampiana tongolo tongolo ireo zavatra nolazainao ary tena tsara. Matetika aho mametraka ny antsasaky ny lanin'ny paoma amin'ny tongolo dia miankina amin'ny tanjany, amin'ny tsiron'ny mpanjifa.
Lola, misaotra betsaka tamin'ny soso-kevitra, hevitra tsara inona !!
Misaotra anao tovovavy, noho ny resipeo sy ny fitiavana narotsakao tao.. Efa 12 taona no nanaovako ilay thermo, tamin'ity taona ity no nividianako ilay vaovao ary mitombo ny andro …… Miarahaba ary mitohy toy izao. Androany handeha aho hanao jamam-paoma,.
voankazo manuela clavijo dia hoy izy:
Efa ela no nanarahako ny pejinao ary tiako be ny resinao. Androany aho hanao ny puree paoma ho haingo ho an'ny valahana ronono. Tratry ny fialantsasatra ary tratry ny taona 2015.
Valio ireo voankazo Manuela Clavijo
Pie Cherry miaraka amina crumb